Ezweni lanamuhla, kanye ukuvela izici ezintsha futhi ukuthuthuka kwezobuchwepheshe kanye nezifo ezintsha eziye zavela. Kunzima ukuthola umuntu akanayo uhlobo oluthile ukugula okungalapheki noma izinkinga ezihlobene isisu namathumbu. A isidlo, ukudebeselela ukudla okushisayo, lokudla ku okusheshayo Izitolo ukudla, amanzi amnandi carbonated, utshwala, ngokwemvelo, ukusetshenziswa ekuphileni okunjalo, kancane kakhulu kunalokho nemibi. Bayaqhubeka bekhula futhi uhlu izifo, bese linikeza uhlu kwemithi, kanye nezinye izindlela ezihlukahlukene ekwelapheni izifo.
Okuvame kakhulu izifo emathunjini
Duodenitis - yisishiso ulwelwesi duodenal. Izilonda we duodenum kwakukhona ubuhlungu obuhlabayo kunoma yiziphi izindawo esiswini. Cishe isilonda peptic ukukhuluma nokulinyazwa, kodwa kungenziwa kuphela ukutholwa ukuhlolwa laboratory, uma igazi kuba kakhulu, sezinyawo iba abamnyama.
Enteritis - ukuvuvukala ulwelwesi emathunjini amancane. Iningi lezi zinkinga emathunjini kukhona ngenxa ukutheleleka nge Escherichia coli. E. coli uhlale esiswini, kodwa ngaphansi kwethonya microflora okungekuhle iqala ukwenza kusebenze futhi udedele ezinobuthi. Vele Amagciwane kungaba enterococci futhi streptococci. Isibonakaliso eyinhloko ukuvuvukala emathunjini amancane - hhayi kakhulu ngokuvamile, futhi frothy izimbici sezinyawo, kungekho nephunga abukhali. Kukhona izinhlungu imvelo ezahlukene kulo esiswini.
Nesifo - yisishiso emathunjini ezinkulu. Izimpawu yesifo kungenzeka uqondane izimpawu of peptic isilonda isifo, ubuhlungu besisu, indle emnyama. Kukhona futhi izici: njalo kakhulu sezinyawo emancane, nge esiningi isikhwehlela futhi frothy, nge nephunga ezingemnandi Putrid, ephelezelwa zibe. Njengomthetho, nesifo abekho ngokuhlukile enteritis.
Proctitis - yisishiso ingemuva. Ngo inqubo sokuzikhulula wezwa ubuhlungu kaningi livela indle ukopha, okuyinto kungase kubonise emifantwini, hemorrhoids izimila endaweni bendunu.
Typhlitis - ukuvuvukala we cecum. Ehamba izinhlungu abukhali esiswini, okuyinto zinganikwa ku ohlangothini lwesobunxele. nezinye izimpawu Ngokuvamile obusobala isifo wamathumbu, isibonelo, esihlalweni ecasukile, imfiva kanye amajaqamba.
Appendicitis - ukuvuvukala isithasiselo saleli Bhayibheli. Acute ukuvuvukala kuhambisana isicanucanu nokuhlanza, imfiva, futhi kuncike indawo ezihlukahlukene izinhlobo ubuhlungu. inqubo Indawo ingahle esifundeni iliac, eduze izihibe emathunjini, ngisho esikhaleni intercostal. Ubuhlungu buba bukhulu nakakhulu uma ukhwehlela, behleka sneezing, uma isiguli amanga. Ikakhulukazi esezwa ukuhlaba okubuhlungu kule sikhundla lisalele ohlangothini lwesobunxele. Ingabe kube uphawu uqwembe ezimhlophe olimini. Ukwelashwa - ukususwa kuhlinzwa ka isithasiselo saleli Bhayibheli.
iziyaluyalu Functional - ukwephulwa of peristalsis. the emathunjini - ekunyusweni ukudla okugayiwe ngosizo imisipha ezindongeni amathumbu. izifo ezihlukahlukene emathunjini kungase Ngakolunye sisheshe khona noma decelerate peristalsis, kanjalo zingabonakala ukuqunjelwa noma isifo sohudo. Nakuba isifo sohudo akulona uphawu ukuvuvukala njalo, into enjalo ngezinye izikhathi kungaba senziwa imizwelo, ukudla ezingavamile noma ukudla esingavunyelwe kugaywe (bran, ikhasi izithelo nemifino). Ukuqunjelwa kungase kubonise lube buthaka jikelele imisipha, ungakwazi futhi nomthelela ekuphileni onamawala (okuqhubekayo kweso, futhi umzimba uvuma), ukuphila umzimba, njalo amandla supply kalula ukudla digestible (inyama, amaqanda, imikhiqizo yobisi) esiswini Ufika esetshenziswa ukungabi khona abakucasulayo ukudla, futhi ngemuva lokhu imisipha buthakathaka, ngaphandle kwalokhu ukudla okungukuthi ngokuphelele kugaywe. Ukuqunjelwa nakho kungaba izimpawu nezifo (isb, nesifo).
Zonke iziyaluyalu emathunjini ukwabelana izimpawu ezivamile - ubuhlungu besisu nokukhungatheka ngezinsimbi zesihlalo.
Zonke izimpawu zezifo emathunjini kungenzeka ukuthi umataniswe nezinye izifo, isibonelo, abesifazane babe ubuhlungu besisu kungase kuhlobane izinkinga gynecological. Isikhathi ngasinye kwezintathu ekwelapheni izifo ngaphakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu angakhuluma kuphela emva izinga ukuxilongwa, khona baneHholo izindlela esiphezulu eliphumelelayo isifo ngasinye. Njenganoma iyiphi ukugula, isikhathi izifo ziyasibona emathunjini kungaba babhebhethekise isimo futhi kuholele ukuhlinzwa lapho kwakunokwenzeka ukwenza ngaphandle kwemithi.
Ubuhlungu amathempeli nezimbangela zayo
Ihhotela soMkhulu Club La Mer Art 5 * (Kemer, Turkey): incazelo, izithombe kanye nokubuyekeza